Saxannada aad dhagaysan karto Oktoobarkan | Bezzia
Diiwaanada aad dhagaysan kartid bisha Oktoobar
Maria vazquez | 07/10/2021 12:00 | Wararka
Bishan waxaad haysataa fursad aad ku maqasho markii ugu horreysay albamyada cusub ee farshaxan -gacmeedyo wanaagsan. Bezzia kuma wada xusi karno dhammaantood, sidaa darteed waxaan sameynay xulasho yar oo ah 6 fanaaniin ama kooxo in ayaa sii daayay ama sii daayay album cusub bishan. Kee baad rabtaa inaad maqasho?
1 Koonfurta dooxada - Quique González
2 Dhammaantood macno ayey yeelan doonaan - James Arthur
3 Toddoba iyo toban ayaa hoos maraya - Sam Fender
4 Webiga iyo dhagaxa - Morgan
5 Kumanaan dagaal - Malú
6 Banners buluug - Lana del Rey
Koonfurta dooxada - Quique González
Oktoobar 1, Oktoobar XNUMX waxay arkeen iftiinka albumka cusub ee Quique Gonzalez: Sur en el valle. Ururinta 12 raad oo ah dabeecad jiritaan calaamadeysan, kaasoo duubay oo ay hareereeyeen fannaaniin joogto ah sida Toni Brunet (wax soo saar iyo gitaar), Jacob Reguilón (bass), Eduardo Olmedo (durbaanno) iyo Alejandro Climent (pianos).
Waraaqaha ayaa mar kale la saxeexay Quique González Marka laga reebo "Run ma aha" ee uu qoray Kirmen Uribe. Waxaa sii daayay sumadda Diiwaanka Cultura Rock, waxay muujineysaa qeybinta xubnaha Morgan: David Schulthess "Chuches" (Hammond iyo Wurlitzer) iyo Carolina de Juan (codad taageeraya). Laga soo bilaabo albumka waxaan awoodi karnay inaan dhegeysanno May I die and Jade, oo aad fiidiyowgiisa ku raaxeysan karto hoosta.
Dhammaantood macno ayey yeelan doonaan - James Arthur
Kaliya waa inaad sugtaa ilaa berri si aad u maqasho Dhammaantood waxay macno samayn doonaan aakhirka, albumkii afraad ee James Arthur. Ururinta 14 waddo oo leh Daawada oo ah tii ugu horraysay, kuwaas oo aan sidoo kale awoodnay inaan maqalno Sebtembar, Avalanche iyo Emily.
Albamka ayaa qaab ahaan ku yeeshay guriga, iyada oo ay jiraan dad tiro yar, taas oo u saamaxday in uu noqdo mid u nugul sidii hore. Ka dib markii aad ka iibisay in ka badan 30 milyan oo rikoodh mashaariicdii hore, mashruucani miyuu mar kale sasabi doonaa dadweynaha?
Toddoba iyo toban ayaa hoos maraya - Sam Fender
Toddoba iyo toban hoos hoos marayaa waa Albumkii labaad ee Sam Fender. Waxaa sii daayay Polydor Records, albumka waxaa lagu duubay Waqooyiga Shields waxaana soo saaray Bramwell Bronte, sidoo kale wuxuu ahaa muuqaalkiisii ​​ugu horreeyay, gantaalaha Hypersonic (2019). Waxay noqon doontaa mid kale oo ka mid ah albamyada la sii deyn doono berri, in kasta oo aad horay uga iibsan karto dhammaan aaladaha.
Ku saabsan albamkan cusub Sam Fender ayaa yiri: «Waa sooyaalka sheekada da'da. Waxay ku saabsan tahay da 'weyn. Waa dabbaaldegga nolosha dhib kadib, iyo dabbaaldegga badbaadada. Jidka raadinaya magaciisa albaabka ayaa loo adeegsaday horudhaca koowaad. Kadib waxaa yimid Aay oo hoos u deg.
Webiga iyo dhagaxa - Morgan
Bishii Oktoobar 15, Wabiga iyo dhagaxa, the Albumkii saddexaad ee Morgan ee Morgan, aruurinta 10 heesood oo ay ku bilaabeen inay shaqeeyaan ka dib markii ay xidhxidhay Covid-19, oo leh falsafad la mid ah sida had iyo jeer: "qaado dhowr fikradood oo ka feker iyaga oo isku dayaya inay sahamiyaan bay'adaha, fikradaha iyo dhawaaqyada waxoogaa ka sii badan."
Ku dhawaad ​​hal sano oo shaqo ah, bilowgii 2021, kooxda Isbaanishku waxay ku duubtay heesaha heesaha Istuudiyaha Le manoir de Léon ee Faransiiska. Soo -saarista Campi Campón, isku -darka Stuart White ee Los Angeles, iyo hanashada Colin Leonard ee Atlanta, albumka waxaa loo soo bandhigay Kalidaa sidii horudhaca koowaad, oo ay ku xigto Wabiga.
Kumanaan dagaal - Malú
Mid kale oo ka mid ah albumyada aad awoodi doontid inaad dhageysato Oktoobar wuxuu noqon doonaa Mil Batallas, oo ah albumkii istuudiyaha laba iyo tobnaad ee Malú. Waxay noqon doontaa Oktoobar 22 marka shaqadan cusub loo iibin doono taas oo ah fanaanka reer Spain wuxuu la shaqeeyay soo -saare Pablo Cebrián. "Hees kasta dagaal, dagaal walba daqiiqad si aad u dareento oo aad u noolaato ...", ayuu fanaanku ka faallooday mashruuca.
Qarsoodi codadka ayaa ahaa horudhaca koowaad ee albumka ka dibna wuxuu yimid waddada magaceeda siisa albumka. Waxaa sidoo kale ku jira shaqadan Tolidda Wings oo ah waddo gunno ah, hees la sii daayay Abriil 29, 2020 intii lagu gudajiray bilowga masiibada Covid-19, oo ay ku muujisay hooyonimadeeda xigta waqtigaas. Intaa waxaa dheer, albumku wuxuu ka muuqan doonaa a marti gaar ah, Mario Domm oo ka socda kooxda reer Mexico ee Camila, oo ku wehelin doonta Duufaanta Kadib.
Banners buluug - Lana del Rey
Banners buluug ah ayaa ah Albumkii labaad ee Lana Del Rey ee sanadkaan 2021 ka dib Chemtrails ka badan naadiga dalka. Bishii Maajo 20, 2021, saddex waddo ayaa la sii daayay iyada oo horudhac u ah shaqadan cusub: Banners buluug ah, Buugga Qoraalka iyo Dabka Duurjoogta ah. Labadii hore waxay ka koobnaayeen Gabriel Edward Simon, kii ugu dambeeyay ee Lana Del Rey uu la sameeyay Mike Dean oo isna ah soo saaraha heesta. Dhowr bilood ka dib, 8 -dii Sebtembar Arcadia waa la sii daayay.
Isagoo la jaanqaadaya horudhaca Arcadia, farshaxan -yahanku wuxuu faallo ka bixiyay: «Waxaan u malaynayaa inaad dhihi karto albumkan wuxuu ku saabsan yahay ku saabsan sidii aan ahaa, wixii dhacay iyo sida aan hadda ahay. Haddii aad danaynayso, ku noqo oo dhegayso saddexdii heesood ee ugu horreeyey ee aan daabacay. Waxay ka warramayaan bilowga. Heestani meel bay dhexda ka ciyaartaa marka diiwaanka soo degtana waxaad maqli doontaa halka aan maanta joogno. In kasta oo dhaleeceynta socota ay isku dayeysay, waxay ugu yaraan igu riixday inaan baarto geedka reerkayga, si qoto dheer u qodo, oo aan sii caddeeyo xaqiiqda ah in Ilaah kaliya daneeyo sida aan adduunka ugu dhex socdo. In kasta oo ay jiraan shakiyo badan oo ku saabsan iska -yeel -yeelidda jilicsanaanta iyo sharraxaadda aan maangalka ahayn ee ah inaanan muujin mas'uuliyadda guud, waa inaan dhahaa waxaan ku raaxeystay inaan adduunka si yaab leh ugu dhex -maro, sidii haweeney nimco iyo sharaf leh. Waxaan u mahadcelinayaa saaxiibbaday 18kii sano ee la soo dhaafay kuwaas oo tusaale u ahaa soo jiidashada, ee aan ahayn dallacsiinta. Marnaba ma dareemin baahida loo qabo inaan naftayda kor u qaado ama aan sheego sheekadayda, laakiin haddii aad xiisaynayso, albumkan ayaa u sheegaya oo ficil ahaan ma sameeyo wax kale. ”
Xusuusnow, dhammaan albamyadaan waad dhagaysan kartaa kahor dhammaadka Oktoobar. Keebaad ku bilaabi doontaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Diiwaanada aad dhagaysan kartid bisha Oktoobar
Dhar noocee ah ayaa dejin doona isbeddelkan dayrta oo aadan weli garanayn?
Sida loo soo celiyo dhar -dhaqe hore talaabo talaabo